ကျနော်တို့ရှိပါတယ် Webtalk Stars Team 🏆 - 💌 WebTK - သင်၏လက်မှတ်သို့ WebTalK 🚀, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သတင်း & ပိုပြီး Invite 🔥
ဇြန္လ 12, 2020 မေလ 5, 2019 by Webtk.co
Webtalk ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော်လှန်ရေးဖြစ်ပြီးမင်းတို့လုပ်နေတယ် Webtalk အတွေ့အကြုံပိုကောင်းတယ်။ အားလုံးအခမဲ့!
အသစ် Webtalk? ဒီအတိုတင်ဆက်မှုကိုကြည့်ပါ။
ဘာကြောင့်လဲကြည့်ပါ လာရောက်ပူးပေါင်း Webtalk ငါတို့နှင့်အတူသင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်:
အဆိုပါ Webtalk Stars Team is ကျွန်တော်တို့၏ အဖွဲ့ Webtalk။ အဲဒါဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဥစ္စာ အရမ်း!
အရေးကြီးသော: တစ်ခုတည်း အဝေးပြေးလမ်း ပူးပေါင်းရန် Webtalk Stars Team ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည် Webtalk မှတိုက်ရိုက်အကောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုသင့်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့သူကိုမေးတဲ့အခါ“ STAR” ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အခွင့်ထူးခံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသည်။ သင်ပြီးသားဖြစ်လျှင် Webtalk၀ င်ခွင့်ကြေး (ဒေါ်လာ ၉၉၅) ပေးရမည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး မှလွဲ၍ သင်တို့၏အသင်း ၀ င်ခြင်းနှင့်အသင်း ၀ င်ခြင်းအသစ် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းသို့မဝင်နိုင်ပါ။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါက။
အဆိုပါ Webtalk Stars Team အင်တာနက်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်အနုပညာရှင်ကတည်ထောင်ခဲ့သည် Jacques-လူးဝစ် Kreiss, ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့သူ Webtalk ၂၀၁၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်အစောပိုင်း beta အသုံးပြုသူအဖြစ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်Aprilပြီလတွင်လက်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် လွတ်လပ်သော Webtalk Affiliate.
အဆိုပါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Webtalk Stars Team အသင်း ၀ င်များအားများစွာနှင့်သီးသန့်အားသာချက်များကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
အသက်အဘို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းနှင့်အတူ 50% ဝင်ငွေရှယ်ယာ: ငါတို့သည်၏စံနမူနာယူ Webtalk သုံးစွဲသူများနှင့်သူတို့၏ ၀ င်ငွေ၏ ၅၀% အထိမျှဝေပြီးနောက်ထပ် ၅၀% သောအသင်း ၀ င်ငွေဝေစုကိုအပိုဆုကြေးပေးသည်။ အကယ် Webtalk Stars team ကနေတစ်လအတွက်အသားတင် $ 100,000 ဝင်ငွေ Webtalkအောက်ပါအစီအစဉ်အရသိရသည် $ 50: ကပမာဏ၏ 50,000% ပြန်လည်ဖြန်ဝေပါလိမ့်မယ်:
$ 5,000 Non-အမြတ်အစွန်းနှင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်
$ 10,000 သူတို့နှင့်အတူအောင်မြင်ကူညီရန်သင်တန်းနှင့်နည်းပြအလုပ်ကိုငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါပေါ်ကုန်လိမ့်မည် Webtalk
အသင်းသားများ၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ ၀ င်များအားပြန်လည်ဝေငှမည်ဖြစ်သည်
$ 5,000 ဘုံကုန်ကျစရိတ်, အခွန်နှင့်ငွေပေးငွေယူအဖိုးအခဘို့သိုထားနေကြသည်။
အဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးအတွက်ရည်မှန်းထားသောနည်းပြ။ သင်၏အောင်မြင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုဖြစ်သည် အဲဒါကြောင့်မင်းကိုအနိုင်ရအောင်ငါတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး Webtalk အသုံးပြုသူ, သြဇာနှင့်တွဲဖက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူပိုပြီးရက်ရက်ရောရောမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ယခုဆုံးဖြတ်ချက်ဥစ္စာဖြစ်ပါသည်: သင်သည်မည်သည့်ပူးပေါင်းချင်ကြဘူး Webtalk အဖွဲ့သို့မဟုတ်သင် join ချင်ကြဘူး အကောင်းဆုံး Webtalk အဖွဲ့?
join ဖို့ Webtalk နှင့် Webtalk Stars TeamJoin“ ကိုနှိပ်ပါ Webtalk"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကနေ ဒီမှာ။
သမိုင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးကော်မရှင်ကိုသြဂုတ်လတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ 2019 ။ ကြည့်ပါ ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင် Iloanya သူမ၏ဘဏ်ငွေလွှဲလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည် မှ Webtalk Stars Team 😍
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်း ၀ င်များအားကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်ငွေကိုမျှဝေရန်ဖြစ်သည်:
Team Webtalk Stars အခွန်ခွဲဝေမှုအစီအစဉ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းချက်များအရကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်နှစ်ပွင့်အဖွဲ့ ၀ င်များ (၂၀၂၀ တွင်အနည်းဆုံးတက်ကြွစွာရည်ညွှန်းချက် ၁၀ ခုရှိသည့်အဖွဲ့ဝင်များ) သည်ယခု မှစ၍ ၅ နှစ်အတွင်းတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကြားအထိရသင့်သည်။ ဒါကအသင်း ၀ င်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲ Webtalk Stars Team သင်မှတိုက်ရိုက်လုပ်နိုင်သည့်ဝင်ငွေမပါဝင်ပါ Webtalk။ ငါတို့စစ်ဆေးပါ ဝင်ငွေဂဏန်းတွက်စက် ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ Webtalk။ သင်ရရှိမည့်ပမာဏကိုသင်အာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ Webtalk မကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ထံမှ။
Team Webtalk Stars ကြယ်ငါးပွင့်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက် (၂၀၂၀ တွင်အနည်းဆုံးတက်ကြွစွာရည်ညွှန်းချက် ၁၀ ခုရှိသည့်အသင်းဝင်များ)
ဒီထူးခြားတဲ့ ၀ င်ငွေအခွင့်အလမ်းကမင်းအတွက်ပါ ယခုငါတို့အသင်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ဒီသမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတဲ့အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။
အခမဲ့ခံစားရ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါက။
PS: ငါတို့လည်းနေတယ် webtalkstars.com
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဇြန္လ 12, 2020
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား webtk.co အကြောင်း Tags: ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, Jacques-လူးဝစ် Kreiss, mass မီဒီယာ, နယူးမီဒီယာ, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, လူမှုကွန်ယက်, Web ကို 2.06မှတ်ချက် post navigation
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2019-05-05
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2019-05-06
“ ငါတို့က Webtalk Stars Team 🏆”
ဇူလိုင်လ 2, 2019 မှာ 4: 02 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 26, 2019 မှာ 4: 47 ညနေ
ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်း join ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Webtalk မှာတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့် https://news.webtalk.co/6629702
ဇွန်လ 4, 2020 မှာ 5: 06 ညနေ
webtalk အာဖရိကတိုက်သားများကိုလည်းပိုမိုတိကျစွာကКот d'Ivoire ရှိသူများလား။
ဇွန်လ 4, 2020 မှာ 7: 06 ညနေ
ဟုတ်တယ်မက်စ်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးသုံးနိုင်သည် Webtalk လစဉ်လစာငွေရ။
ဇွန်လ 10, 2020 မှာ 6: 36 နံနက်
ဒီတော့ဒီလောက်ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲ webtalk ငါတောင်အာဖရိကမှာပါ
ဇွန်လ 10, 2020 မှာ 10: 06 နံနက်
Webtalk 100% အခမဲ့ ၀ င်ရောက်နိုင်ပြီးတောင်အာဖရိကတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၀ မှ စတင်၍ သင့်အားအဆင့် ၅ ဆင့် (အချိန်ကန့်သတ်ချက်အကန့်အသတ်) ဖြင့် ၀ င်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဆုများကိုရယူနိုင်သည်။ ရွေးချယ်နိုင်သည့် Pro upgrade တစ်ခုရှိပါသည်။ Webtalk အရမ်းအခမဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အဖြစ်။
ပင်မစာမျက်နှာ - webtk.co အကြောင်း - ကျနော်တို့ရှိပါတယ် Webtalk Stars Team 🏆